Teo nefa vao tsikaritray ilay takela-by famantarana ny sisin-tany. Mbola tena lavitra anay izany! Tany amin’ny faritra tsy izy izahay no nanao ilay fitsangantsaganana. Mbola tany Alemana Atsinanana izahay!
Mety hipoitra amin’ny fotoana tsy ampoizina ireo mpiambina ny sisin-tany!
Nangonin’ny reniko tamim-pahamehana ny sakafonay ary nihanika haingana ilay havoana araka izay vitanay izahay. Tamin’ity indray mitoraka ity dia tsy sahy nijanonjanona intsony izahay raha tsy efa fantatray tsara fa tonga tany amin’ny faritra ilan’ny sisin-tany izahay.
Na dia samy nandray lalana samihafa aza ny olona tao amin’ny fianakavianay sy tojo fahasahiranana samihafa teny an-dalana dia samy nahavita izany dia izany ihany izahay. Tafaraka toy ny fianakaviana iray indray izahay tamin’ny farany. Tena andro iray lehibe izany!
Ny zavatra vao notantaraiko taminareo teo dia zavatra niainana izay mifono dia tena sarobidy ho ahy. Afaka manao jery todika ny fiainako aho ankehitriny ary mahita karazana “dia” maro toy izany nataoko teo amin’ny fiainana rehefa nandeha ny fotoana. Tsy nahitana famakivakiana tendrombohitra na fanalavirana ara-pôlitika daholo akory izy ireo fa ny sasany misy ifandraisany bebe kokoa amin’ny fiatrehana fitsapana na fivoarana eo amin’ny fiainam-panahy. Fa azo antsoina hoe dia daholo izy rehetra. Izaho dia mino fa ny fiainana tsirairay dia fitambaran’ireo “tantaran’ny dia” nataon’ny tena manokana.
Azoko antoka fa fantatrareo hoe ny fomba amam-panao ara-kolotsaina dia manan-karena tantara momba ireo dia. Ohatra, mety ho fantatrareo ny dian’i Dorothy sy ilay alikany, Toto, ao amin’ny Le Magicien d’Oz. Nofaohin’ny tafio-drivotra i Dorothy sy i Toto ka nentin’izany tany amin’ny Tanin’i Oz. Nahita lalana miavaka vita tamin’ny biriky mena i Dorothy tao, izay namaritra ny lalan’ny dia iray izay nitondra azy nody tany an-tranony tamin’ny farany.
Ary nisy koa i Ebenezer Scrooge an’i Charles Dickens, izay nanao dia tsy nitondra azy tany amin’ny toerana samihafa fa tany amin’ny vanim-potoana samihafa. Dia iray niseho mivantana tao am-pony izany izay nanampy azy hahatakatra ny antony nahatonga azy ho toy ny nahitana azy tamin’izay sy hahita ny zavatra hitranga raha toa ka mbola manohy mandeha amin’ny lalan’ny fitiavan-tena sy tsy fanehoam-pankasitrahana izy.1
Ny iray amin’ireo tantara noforonina izay malaza ao amin’ny literatiora Sinoa dia ilay hoe: Ny Dia Miankandrefana. Nosoratana tamin’ny taonjato faha 16 izany ary mitantara amin’ny fomba mahatalanjona ny tantaran’ny dia kisendrasendra sy fifindra-monin’ny religiozy mpitoka-monina iray izay nampian’ny olona tsara fanahy efatra nanao dia nankany amin’ny fahazoana fahalalana ara-panahy.
Ary tsy adino koa i Bilbo Baggins, ilay olona kely sy tsotra izay naniry mafy ny hijanona fotsiny ao an-tranony sy hihinana lasopy foana, kanefa taorian’ny fandondonana ny varavarany dia nanaraka ny antson’ilay olon-tsy fantatra izy ary nandeha nankany amin’izao tontolo izao niaraka tamin’ny majisiana iray sy ireo andian’olona fohy kely mba hanatontosa iraka feno loza manambana saingy tena manan-danja.2
Tantara iray hain’ny rehetra
Moa tsy tiantsika tokoa ireny tantaran’ny dia ireny satria toa afaka maka ny anjara toeran’ireo mpanao ny dia ireny isika? Afaka manampy antsika hahita ny lalana horaisintsika mandritra ny fiainana ny fahombiazany sy ny tsy fahombiazana. Ilay horonan-tsary vao nojerentsika minitra vitsy lasa teo dia nitantara dia iray nahafinaritra. Angamba mety mampahatsiahy antsika koa ny tantaran’ny dia iray izay tokony ho fantatry ny rehetra ireo tantara ireo—tantaran’ny dia iray izay hihazonantsika tsirairay avy anjara toerana manan-danja.
Efa nanomboka taloha ela be izany tantara izany, talohan’ny nanombohan’ny tany nihodidina teo amin’ny soridala-manodidiny, talohan’ny nanombohan’ny masoandro nampivelatra ny hafanany nankany amin’ny hatsiakan’ny tontolo ary talohan’ny namenoan’ireo zava-boahary lehibe sy kely ny planetantsika. Any amin’ny fiantombohan’ity tantara ity dia nipetraka tany amin’ny toerana tsara tarehy tany lavitra tany ianareo.
Tsy mahafantatra ny antsipiriany betsaka mikasika ny fiainana tany amin’izany tontolo talohan’ny nahaterahana izany isika saingy mahafantatra zavatra vitsivitsy kosa. Nambaran’ny Raintsika any an-danitra hoe iza Izy, iza isika ary mety ho lasa tahakan’iza.
Raha iverenana ny tany amin’ny toetra voalohany dia nahafantatra tamim-pahatokiana tanteraka ianareo fa misy Andriamanitra satria nahita sy nandre Azy ianareo. Nahafantatra an’i Jesoa Kristy ianareo, izay ho tonga Zanakondrin’Andriamanitra. Nino Azy ianareo. Ary fantatrareo fa tsy ny hitoetra ao anatin’ilay fonenana talohan’ny nahaterahana misy fandriampahalemana ny hoavinareo. Na dia tianareo tokoa aza izany tontolo mandrakizay izany dia fantatrareo sy nilainareo ny firotsahana amin’ny dia iray. Hiala eo anatrehan’ny Rainareo ianareo, hiampita ny voalin’ny fanadinoana, handray vatana mety maty ary hianatra sy hiaina zavatra izay antenaina fa ha